Koonfurgalbeed oo Boorsooyinkooda ka qaatay Gobolka Banaadir – Horseed Sports Club
Kulankan ayaa ahaa kulankii labaad ee ay Koonfur Galbeed tartanka ka cayaarto iyadoo guuldarro kala kulantay gobolka Banaadir Cayaarti furitaanka tartanka waxuuna kulankan u ahaa Kulankii Rajada, halka Puntland ay kulankii ugu horeeyay tartanka kasoo muuqatay.
Xiddigaha Puntlanad oo weerar xooggan kusoo galay garoonka ayaa bilowga hore dhaliyay laba gool oo degdeg ah iyagoo uga mahad celinaya laacibka No-16 Yacquub Cusmaam Maxamuud, waxaana gool saddexaad inta aan qeybta hore lamarin u dhaliyay Puntland laacibka no- 8 C/waaxid Maxamed Maxamuud.
Marki la isku soo laabtay ayaa kooxda Koofur -Galbeed badal kusoo galiyeen xiddigo wax ka bedelay cayaarta, kuwaasoo abuuray fursado ay goolal ku dhalin kareen balse aysan ka miro dhalin. Waxaan mar kale gool ka dhaliyay Yacquub Cusmaam Maxamuud kaasoo noqday laacibkii ugu horeeyay ee saddexley ka dhaliya tartanka.
Kulanka ayaana waqtigii loogu talo galay kusoo dhamaaday 4-0 oo guushu ku raacday Puntland, waana u nasiib xumo in Koonfur Galbeed labo kulan looga dhaliyo sagaal gool.